စပိန်သို့မဟုတ်စပိန် ISO ကီးဘုတ်များ၊ ဘယ်ဟာကိုသုံးသင့်သလဲ။ ရှာတွေ့သည်! | ငါက Mac ကပါ
စပိန်သို့မဟုတ်စပိန် ISO ကီးဘုတ်လား။
¿စပိန်ကီးဘုတ်သို့မဟုတ်စပိန် ISO ကီးဘုတ်? Apple Computer ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် install လုပ်သည့်အခါသို့မဟုတ်စတင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည် keyboard layout ကိုစပိန် (သို့) ISO ISO ဖြင့်သုံးလိုပါသလားဟုမေးသည့်ရွေးစရာတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကဘာလဲ Spanish ISO? ဘာကြောင့်တစ်ခုထက်ပိုပြီးရှိရတာလဲ။ သူတို့အားလုံးအတူတူမဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်လော ကောင်းပြီမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်ပြtheနာမှာယေဘူယျအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောကီးဘုတ်ပုံစံများရှိသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ပြproblemနာတစ်ခုရှိလျှင် Apple ပင်ဖြစ်သည်။
Apple မှာဘာပြproblemနာရှိသလဲ။ တကယ်တော့အဲဒါကိုပြaနာလို့မခေါ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာသုံးစွဲသူတွေကိုရှုပ်ထွေးစေတဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ Apple ကအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ရင်ငါဘာရွေးရမလဲ - စပိန် (သို့) စပိန် ISO? ဆင်ခြင်တုံတရားအရ၊ အကယ်၍ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုလိုအပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ရှင်းပြပါမည် ကီးဘုတ်အပြင်အဆင်တစ်ခုစီကဘာလဲ နောက်ပြီးကီးဘုတ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဘယ်တစ်ခုကိုရွေးရမလဲ။
1 စပိန်သို့မဟုတ်စပိန် ISO ကီးဘုတ်
1.2 စပိန် ISO ကီးဘုတ်
2 Spanish ISO keyboard ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
3 @ Mac ကီးဘုတ်ပေါ်မှာဘယ်လိုတင်ရမလဲ
4 One-touch သင်္ကေတများနှင့်အသံထွက်များ
စပိန်သို့မဟုတ်စပိန် ISO ကီးဘုတ်
မည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်တစ်ခုချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုတစ် ဦး ချင်းစီမြင်ရလိမ့်မည်။
ရရှိနိုင်နှစ်ခု၏စပိန် option ကို ဒါဟာပန်းသီးကီးဘုတ်ဟောင်းအတွက်ပါ။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ ငါနေရာမှာမရှိတဲ့သော့တွေဖြစ်တဲ့ "C braided" (ç), မေးခွန်းအမှတ်အသားများ၊ အပေါင်းသင်္ကေတများနှင့်တုံးများကဲ့သို့အမှတ်အသားအချို့ကိုငါအမှတ်အသားပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိသောကီးဘုတ်ကိုအသုံးမပြုပါက၎င်းနှင့်တူညီသောမည်သည့်အရာကိုမဆို (ကျွန်ုပ်တွင်မှတ်ဉာဏ်မကောင်းသော) မြင်ရခြင်းကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါကနောက်ထပ် option တစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်။
စပိန် ISO ကီးဘုတ်
စပိန် ISO ဖြန့်ဖြူးခြင်း အသင်းတစ်သင်းရှိလျှင်ရွေးချယ်သင့်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် အတော်လေးခေတ်သစ်။ ခေါင်းစဉ်ပုံ၏ကီးဘုတ်နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းရန်ရှာတွေ့သူများအားလုံးသည် Spanish ISO option ကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ကျွန်ုပ်မှာ ၇ နှစ်သားအရွယ်ရှိပြီး“ အသစ်” ဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကီးဘုတ်နဲ့ပါလာတဲ့ Mac ရှိတယ်။
Spanish ISO keyboard ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းရုပ်ပုံ၏ layout ပါသောကီးဘုတ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်သမျှရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ကီးဘုတ်ဟောင်းတစ်ခုရှိပြီးအသစ်တစ်ခုကိုသင်ဝယ်ယူခဲ့လျှင်၎င်းကိုသင်လုပ်ရမည် စပိန် ISO ဖြန့်ဖြူးသုံးစွဲဖို့က configure။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကျနော်တို့စနစ် preferences ကိုဖွင့်လှစ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ညာဘက်အောက်ပိုင်းရှိသင်္ဘောကျင်း၌ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်« Keyboard »အပိုင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Keyboard ကဏ္Withinတွင် "Input sources" tab ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြသောရွေးချယ်စရာများမှကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန် ISO ကိုရွေးချယ်သည်။ အသေးစားပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
@ Mac ကီးဘုတ်ပေါ်မှာဘယ်လိုတင်ရမလဲ
ဤသည်မှာလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က၊ Mac ၌မရှိလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခဲ့သကဲ့သို့ switchers များကသူတို့ကိုယ်သူတို့မေးသောမေးခွန်းဖြစ်သည် သော့ AltGrဆိုင်းဘုတ်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုထားရမလဲ။ အဖြေကအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာမိုက်မဲတယ် - သော့ alt u Option (လက်တွေ့အားဖြင့်) Windows AltGr နှင့်အတူတူပင် function ရှိသည်။ ဤဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘား၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်သော့တစ်ချောင်းသာမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့တွင်သော့နှစ်ချောင်းရှိသည်၊ ဘား၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဖြစ်သည်။ ဥပမာဆိုရသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုဒါသောက်နေပြီးဘယ်ဘက်သာ သုံး၍ တွစ်တာတွင်အီးမေးလ်တစ်ခု (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုနာမည်ပေးလိုလျှင်ထည့်နိုင်သည်။ @အသုံးပြုသူအမည် လက်ဝဲ Alt key ကိုလက်နှစ်ချောင်း နှိပ်၍ လက်စွပ်သို့မဟုတ်လက်ညှိုးထိုးခြင်း ၂ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်စာရိုက်ဖို့စာသင်ခန်းသို့သွားသည်သို့မဟုတ်သိသူတစ် ဦး ဦး နှင့်စကားပြောဖူးပါက၊ ၎င်းတို့သည်လက်ဝဲဘက်ရှိဆန့်ကျင်ဘက်သော့ကိုလက်ဝဲဘက် Shift to ကဲ့သို့သောပြုပြင်ထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ရတော့မည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ မြို့တော် "P" သို့မဟုတ် "A" ကိုအရင်းအနှီးပိုင်ခွင့်။ လက်ျာလက်လိုအပ်သောတတိယသင်္ကေတကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ရပြီးလျင်မြန်စွာပြုလုပ်လိုပါကလက်ဝဲ Alt ကို သုံး၍ ထိုအမှတ်အသားကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
သင်္ကေတများ y အသံထွက် သော့တစ်ချောင်းဖြင့်
စာရေးခြင်းကိုမည်မျှပင်ပြင်ဆင်သည်ဖြစ်စေစာကိုရေးရန်သော့နှစ်ချောင်းသုံးရန်လိုသည်ကိုမနှစ်သက်သောစာရေးသူများစွာအကြောင်းကျွန်ုပ်သိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ကိစ္စဖြစ်ပါက၊ Mac တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် iOS တွင်ရရှိနိုင်သည့်စနစ်တမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုသင်သိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသင်္ကေတကို iOS တွင်ထားလိုသောအခါ accent သို့မဟုတ်အခြားစာလုံးအမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်သည်။ သရသံကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ ရွေးချယ်စရာများပေါ်ပေါက်လာသည်အထိ“ á”, «à»သို့မဟုတ်«ª»။ ဒီရွေးချယ်မှုက Mac မှာလည်းအနည်းငယ်ကွာခြားပေမဲ့၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကီးတစ်ခုနှိပ်ပြီးကိုင်ထားလျှင်၊ ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာအားလုံးကို၎င်းတို့အပေါ်တွင်ရှိသောနံပါတ်များဖြင့်ပြလိမ့်မည်။ လိုချင်သောသင်္ကေတကိုရွေးရန် scroll scroll (မြှား) များကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ထိုသင်္ကေတကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်ရန်ထိပ်ရှိနံပါတ်များကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်နှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်သံသယရှိပါသလား စပိနျကီးဘုတ် Mac ပေါ်မှာလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » စပိန်သို့မဟုတ်စပိန် ISO ကီးဘုတ်လား။
ငါသိပေမယ့်ခြားနားချက်ကဘာလဲ, ဒါမှမဟုတ်သော့သော့ပြောင်းသွားသည်။ လက်တင်အမေရိကကီးဘုတ်ရှိသလား။ (P ၏ညာဘက်ထောင့်နှင့်အတူ)
Jorge Nunez ဟုသူကပြောသည်
ကံမကောင်းပါဘူး။ ၎င်းတို့ကို Samsung, HP, Dell, IBM, Lenovo, Asus, Sony, Toshiba, Acer စသည့်လက်တင်အမေရိကန်စပိန်ကီးဘုတ်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်သင့်သည်။
ယမ် (@yamilaml) ဟုသူကပြောသည်
ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အားအမှတ်အသားပြုသည် - စပိန် ISO နှင့်စပိန်ဘာသာသာ၊ ငါအခါအားလျော်စွာစပိန်ဘာသာသို့ပြောင်းလဲသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စပိန် ISO အမှတ်အသားကိုမည်သို့အမှတ်အသားပြုရမည်ကိုမသိပါ။ သင်သိလား?
yam (@yamilaml) စာပြန်ခြင်း
ဟိုင်းယမ်း၊ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ကီးဘုတ်တွေဖြစ်လို့ထူးဆန်းနေတယ်။ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာပေါ်လာတဲ့သင်္ကေတကိုသင်မနှိပ်လိုက်ဘူးလား။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်စပိန် (ISO) နှင့်နေထိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ mac ပေါ်ရှိ key keys နှင့်အတူပြaနာရှိနေတယ်။ ဥပမာနံပါတ် 12 <3º4 + 5`6`789 နှင့်အတူသင်္ကေတများကိုရေးသည်။
enzo molina အားပြန်ကြားပါ
ငါစဉ်းစားနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာက System Preferences မှာအမှားအယွင်းများသောပြင်ဆင်မှုမျိုးရှိသည်။ Keyboard မှာမင်းအကုန်လုံးမှာအရာအားလုံးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုငါစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ MacBook Air နှင့်ပြsomeနာအချို့ရှိပါသည်။ ရိုးသားစွာ၎င်းကိုမည်သို့ကောင်းစွာအသုံးချရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် iPhoto application ကိုပိတ်ထားသည်။ App Store မှာ Instagram Facebook လို spotify tumblr စတဲ့ applications တွေကိုပုံမှန် download လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုရှာသောအခါအခြားသူများပေါ်လာသည်။ မူရင်းမဟုတ်ပါ။ i iMovie တွင်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ရန်ရွေးချယ်စရာများများများစားစားမရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။
မာစီလီနို VAZQUEZ Vegas ဟုသူကပြောသည်
စပိန်လို keyboard ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
MARCELINO VAZQUEZ VEGA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jordi Gimenez Spanish iso သည် configuration ထဲတွင်ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
JULIAN ROMAN ကိုပြန်သွားပါ
ထိခိုက်လွယ်သော throb ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဆောင်းပါးများကိုတွေ့ခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဤအဆင့်များဟုတ်ပါသည်။
ပြသနာဖြေရှင်းပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်စပိန်ကို ဖျက်၍ စပိန် ISO သာထားခဲ့ပါ။
စပိန်တွင် NO ce ce trencada ဟူ၍ ရှိသည်။ (DRAE ကိုကြည့်ပါ) ဒီအသုံးအနှုနျးကိုကာတာလနျမှာသုံးတယျ။ စပိန်ဘာသာဖြင့် "cedilla" ဟုခေါ်သည်။
ဥရောပမှာ Apple ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်ဟာလာမယ့်လများအတွင်းတိုးလာနိုင်ပါတယ်
သြစတြေးလျသည် Apple Maps တွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုချဲ့ထွင်သည်